Maxuu ka dhigan yahay laabta xooggan ee ninka | Niman qurux badan
Maxuu ka dhigan yahay laabta xooggan ee nin ka timid
Isku duubnidu waa dareen la wadaag shucuurta aragtidaasna waxay ka dhigaysaa qof walba inuu jecel yahay dareenka si ay u awoodaan in ay bixiyaan hab weyn. Waxaa la siin karaa sababo badan, laga bilaabo salaanta fudud, nooc ka mid ah dabaaldega, ama farxadda qof la arko. Laakin maxay ka dhigan tahay laabta xooggan ee ninka?
Hababka ayaa ah kuwo qurux badan oo macno badan leh. Guud ahaan, hab-dhaqanka hab-dhaqanku waa muujinta kalgacal, taageero iyo ilaalin caadifad, in kasta oo ay lagama maarmaan tahay in la falanqeeyo marka ninku ku habsado, goorta iyo sida xoogga leh.
1 Maxaan dareemenaa marka naloo soo duubo
2 Maxaa loola jeedaa marka nin ku habsado?
3 Maxaa loola jeedaa marka ninku si adag kuugu dhejiyo?
4 Marka ninku dhexda kaa duubo
5 Marka nin ku habsado galmada ka dib
6 Marka uu ku habsado anagoo hurudna
Maxaan dareemenaa marka naloo soo duubo
Haddaynu isku duubno ama helno laab-laabashadaas, tilmaantaas waxay abuurtaa wanaag badan oo ka dhexeeya labada dhinac. Waa tilmaan soo saarta serotonin iyo dopamine badan, taasoo naga dhigaysa mid aad u wanaagsan, xitaa haddii aynaan rumaysan. Way fiicantahay inaad isku duubto qof rabitaan badan leh iyo inay nagu soo dhaweeyaan gacmo furan. Intaa ka dib waan dareemi doonaa aad uga tamar badan oo dareen leh.
Maxaa loola jeedaa marka nin ku habsado?
laabta sidoo kale waxay ka hortagtaa saamaynta xun qaarkood oo qofku wuxuu awood u leeyahay inuu iska saaro cabsida, abuuro ammaan badan, ka dhigi karo nacaybka iyo murugada iyo ka tag daqiiqadaha cadhada. Muddo daqiiqad ah qaar ka mid ah xannibaadaha jireed iyo dareenka ayaa la dayactiray, markaa ficilkaagu wuxuu abuuraa faa'iidooyin badan.
Ninku markuu habsado oo uu sameeyo si joogto ah waxay la macno tahay taas xiriirka ka dhexeeya labada waa mid sii kordhaya. Haddii ay jiraan wax ka badan saaxiibtinimo fudud waxaa laga yaabaa inay koraan macnaha dhawr nooc oo xidhiidh ah. Marka ay isku duubaan sababtoo ah waxay dareemayaan raaxo, waxaad dooneysaa inaad noqoto lammaane oo aad ilaaliso saaxiibtinimadaas muddo dheer.
Haddii ninkaasi dareemo wax ka badan saaxiibtinimada Habka isku-duubnida ayaa ka sii kulul. Markaad si adag u samayn karto, waxaad u samayn doontaa si habsami leh sidoo kale iyo marar badan. Waxaad la yaabi kartaa laabta jilicsan ee dhexda iyo gadaashaba.
Maxaa loola jeedaa marka ninku si adag kuugu dhejiyo?
Nin qiiro leh waxa uu jecel yahay in uu habsiin xooggan siiyo. Jacaylku wuxuu koobi karaa dhinacyo ay ka mid yihiin jacayl, danqasho iyo kalgacal badan. Waxay noqon karaan isku-duub oo lagu bixiyo hab-maamuus fudud, laakiin isku day inaad u fiirsato calaamadaha kale ee ku xeeran. Nin caashaqa ayaa ku hayn doona maxaa yeelay waxa uu dareemayaa xamaasad weyn. Tani waxay la macno tahay in aanay doonayn in ay ku sii daayaan, tilmaanta fudud ee sidaas samayntuna waa sababta oo ah waa ku celinayaa.
Haddii laabtaasi ay dhowdahay oo uu bilaabo Gacmahaaga iyo gacmahaaga hoos u dhig dhabarkaaga, kor iyo hoos u salaaxa, markaas waa sababta wuu kuu danaynayaa oo aad buu kuu xiiseeyaa. Dareenka uu maskaxda ku hayo ayaa ah sida aad muhiim ugu tahay noloshiisa wuxuuna ka baqayaa inuu ku waayo.
Marka ninku dhexda kaa duubo
Waa tilmaan jilicsan marka nin dhexda ku taabto ama habsado. Sida caadiga ah, xaqiiqda ah in la sameeyo sababtoo ah wuxuu dareemayaa rabitaan adiga kuu ah. Marka uu sameeyo isagoo dhexda ku haya oo dhabarka kaa duubaya, waa sababtoo ah dareen kalgacal badanHaddii uu sidoo kale madaxa ku saaro garabkaaga, sababtoo ah wuxuu dareemayaa kalsooni badan oo ku wajahan qofkaas.
Gacmaha is-qabsada ula soco jidka Socodku waa tilmaan jacayl, haddii ay sidoo kale ku qabato dhexdaada waxay noqon kartaa mid aad u macaan. Ma dooneyno inaan ka niyad jabno faahfaahintan, laakiin sida ay qabaan qaar ka mid ah cilmi-nafsiga, xaqiiqda ah in lammaanaha lagu qabsado dhexda markaad socoto waxay noqon kartaa tilmaanta xaasidnimada iyo lahaanshaha.
Marka nin ku habsado galmada ka dib
Galmada ka dib waxay noqon kartaa joogsi buuxda. Laakiin haddii nin ku habsado, ku salaaxo, kula hadlo oo ku dhunkado, sababtoo ah ma rabo in daqiiqadaas dhamaato. Runtii waxay leeyihiin kalgacal badan waxayna muujinayaan dadaal.
Marka uu ku habsado anagoo hurudna
Dabeecaddani waa wax aan jeclaan lahayn inaan helno maalin kasta marka aan jacayl ku jirno. Ninku markuu qof la seexdo habeenkii oo dhan wuu isku duubnaa Wuxuu muujinayaa jacayl iyo dadaal badan. Haddii aad horeba lammaane u tihiin, waxaad dhex maraysaan xidhiidh aad u wanaagsan oo ay tahay inaad noloshaada oo dhan wadaagaan.
Gebagebadii, ninku marka uu ku habsado waxa uu muujin karaa dareeno badan oo u iman kara kicin dareen qarsoon. Marka ay sameeyaan waa sababtoo ah aad bay u faraxsan yihiinWaxay noqon kartaa in wax loo dabaaldego, dhacdo aan lahayn wax ka badan ama sababtoo ah waxaan runtii u baahday boqolkiiba boqol.
Xaalado kale Waxaa laga yaabaa inaan murugoodo waxaana loo baahan yahay in qof aad ku kalsoon tahay uu ku qanciyo. Isku duubnidaadu waxay kaa dhigi doontaa inaad dareento fiicnaan iyo serotonin oo aad qariso niyadda ayay kor u qaadi doontaa. Oxytocin iyo dopamine sidoo kale waa qayb ka mid ah dareemida roonaan iyo raaxaysi badan.
Hababka ayaa aad ugu mahadcelinayaHaddii ay dhacaan, waa sababta oo ah wuxuu dareemayaa inuu ku faraxsan yahay waxaad u sheegtay maalin ama waxa uu jecel yahay inuu garabkaaga joogo. In sidaas la sameeyo waa u mahadnaqid lahaanshaha qof muhiim ah oo kaa xiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Maxuu ka dhigan yahay laabta xooggan ee nin ka timid
Sida loo qurxiyo qolka jacaylka ee nin